Mambo weSpain Ane Mharidzo Yakakosha yeNWTO Nhume, Spain uye Tourism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Mambo weSpain Ane Mharidzo Yakakosha yeNWTO Nhume, Spain uye Tourism
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
World Tourism Network inoombera Mambo weSpain nerutsigiro rwake kuUNWTO neWorld Tourism
Mambo weSpain anotaridza rutsigiro rwakasimba rweUNWTO sesangano
Tourism iRoyal Business muSpain.
Iyo inouya UNWTO General Assembly inogona kuve chiitiko chakakosha kune indasitiri iri mudambudziko - World Tourism.
Izvi zvinozivikanwa neSpain, nyika inotambira World Tourism Organisation (UNWTO).
Hapana mumwe kunze kweMambo wake, Hukuru Felipe VI, Mambo weSpain, ari kuona kukosha kwekushanya kwenyika yake nepasirese.
Anozivawo kuti zvakakosha sei kuti nyika inotambira sangano reUN irambe isina kwayakarerekera. Kuna Mambo, kuita chisvusvuro cheNWTO Nhume zvakare inotumira meseji kuti yakavanzika uye yakachengeteka nzira yekuvhota inogona kuvimbiswa muSpain.
Spain munguva pfupi yapfuura akatanga kuumba ramangwana rekushanya paFII muRiyadh, Saudi Arabia.
A wekutanga zvachose nyika dzakawanda, dzakawanda-vanobata Tourism Coalition ndiye aive nyeredzi nyowani paCOP26 muGlasgow, Spain payakabatana nedzimwe nyika 9 kuti ive mubatsiri mumubatanidzwa uyu.
Humambo hweSpain, kana humambo hweSpain, hunonzi nebumbiro remutemo seThe Crown, inzvimbo yebumbiro uye hofisi yepamusoro yeSpain. Humambo hunosanganisira mambo ari kutonga, mhuri yake, uye sangano reimba yehumambo iro rinotsigira nekufambisa mambo mukuita basa rake uye kodzero.
Semunhu ari pachinzvimbo chake uye mukukura, Mambo weSpain anogona kufananidzira meseji yakakosha yekutsigira indasitiri (kushanya), uye sangano. (UNWTO), pasina kuonekwa kwekupindira, kutsigira, kana kurambwa munyaya dzakaita sevhoti repachivande kuti Munyori Mukuru asimbiswe.
Naizvozvo, kuita kuti Hukuru Hwake vagamuchire chirairo chenhume pamusangano unouya weUNWTO General Assembly kubva pasirese inomiririra meseji yake yekunyarara yekusarerekera uye inogona kuonekwa serutsigiro rukuru rwekushanya kwepasi rose.
The World Tourism Network inoziva kukosha kwekufamba uku uye yakapa chirevo chinotevera nhasi.
WTN Mhinduro kuRutsigiro naMambo Hwake, Hukuru Felipe VI, Mambo weSpain, kune Global Tourism.
Honolulu, Hawaii, USA - The World Tourism Network inoshuvira kuratidza kutenda kwayo kukuru kuna Mambo Felipe VI, Mambo weSpain, nerutsigiro rwake rwekushanya.
Dr. Peter Tarlow, Mutungamiri weWTN, uye Dr. Taleb Rifai, WTN Patron uye aimbove Secretary-General weUNWTO, akataura kuti Hukuru Hwake akashanda kutsigira indasitiri yezvekushanya, uye sekuda kwemunhu ane chimiro chake, akanzvenga zvibvumirano zvake.
Mambo Felipe VI vakashanda nesimba kuunza kumutsiridzwa kweindasitiri yekushanya.
WTN inokwazisa Mambo Felipe VI uye inotaura kutenda kwayo nezvese zvakaitwa naMambo kumaindasitiri ezvekushanya pasi rose.
World Tourism Network (WTN) izwi rakareba-refu remabhizinesi madiki uye epakati-saizi ekufamba uye ekushanya pasirese. Nekubatanidza kuedza kwedu, WTN inounza pamberi izvo zvinodikanwa uye zvishuwo zvemabhizinesi madiki-nepakati nepakati uye vanobatana navo. WTN haingomiriri nhengo dzayo chete asi inovapa izwi pamisangano mikuru yekushanya. WTN inopa mikana uye yakakosha network kune nhengo dzayo munyika zana nemakumi maviri nesere. Mamwe mashoko: www.wtn.travel